रवि नेपाल आइडलको ‘टप ६’ मा पुग्न सफल, नीलिमा बाहिरिइन् ! - Everest Dainik - News from Nepal
रवि नेपाल आइडलको ‘टप ६’ मा पुग्न सफल, नीलिमा बाहिरिइन् !
काठमाडौं, कार्तिक ३० । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ मा सुदूरपश्चिमबाट सहभागी रवि ओड ‘टप ६’ मा पुग्न सफल भएका छन् ।
दर्शकको भोटका आधारमा उनी ‘टप ६’ मा पुग्न सफल भएका हुन् । आज चितवनी नीलिमा थापा मगर बाहिरिएकी छन् । नीलिमाले भोटका लागि बिहीबार ‘बेहुली’ बोलको गीत गाएकी थिइन् । रविले भने हिजो (बिहीबार) को अंकमा ‘नाइ मलाई थाह छैन’ बोलको गीत गाएका थिए ।
ट्याग्स: Neelima Thamapagar, nepal idol, Ravi oad